Booliiska Mareykanka oo si xun ula dhaqmay Gabar Kalkaaliso ah (Daawo Sawirada) | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Booliiska Mareykanka oo si xun ula dhaqmay Gabar Kalkaaliso ah (Daawo Sawirada)
Bulsha:- Labo askari kamid ah ciidamada booliiska dalka Mareykanka ayaa si xul ula dhaqmay gabar kalkaaliso caafimaad ah oo diiday in ay dhiig ka qaado bukaan miyir daboolan oo la geeyay isbitaal ay ka shaqeeneysay.
Askartan katirsan booliiska magaalada Salt Lake City ayaa lagu eedeeyay in ay sharafta uga dhaceen ciidanka booliiska Mareykanka, waxaana labadan askari hada wajahayaan dhaleeceyn xoogan oo kaga imaaneysa dhinacyo kala duwan.
Waxaa socda baaritaano ku saabsan kiiska labadan askari ee ku aadan falka ay kula dhaqaaqeen gabadha kalkaalisada ah, waxaana muuqaalka sida ay wax u dhaceyn duubtay kaamirad ku xirned mid kamid ah labada askari ee sida xun ula dhaqmay Kalkaalisada.
Kaamirad ku xirneed askariga lagu magacaabo Jeff Payne ayaa laga arkay isaga oo qabanaya ka dibna gacmaha ka xiraya Kalkaalisada lagu magacaabo Wubbels, oo u sheegtay in aysan nidaamka waafaqsanayn in bukaanka ka qaado dhiiga ay ka dalbadeen.
Muuqaalka ayaa laga maqlayay codka Kalkaalisada oo ku cataabeysa in aysan wax dambi ah galin, waxaa sidoo kale muuqaalka laga dhageystay codka askariga Jeff Payne oo sheegaya in uu isbitaalka ka aarsanayo.
Duqa magaalada Salt Lake City, Jackie Biskupski ayaa si kulul u cambaareeyay falkan ay ku kaceen ciidamada booliiska, waxa uuna sheegay in falka lagula kacay Kalkaalisada in uu yahay mid aan la aqbali karin.